हेक्सारेलिन बारे सबै कुरा
1। हेक्सारेलिन इतिहास र अवलोकन
2। हेक्सारेलिन गुणहरू र यसले कसरी काम गर्दछ
3। हेक्सारेलिन प्रभावहरू
4। हेक्सारेलिन साइड इफेक्ट
5। Hexarelin प्रयोग
6। पेप्टाइड हीक्सारेलिन अनलाइन किन्नुहोस्
1. हेक्सारेलिन इतिहास र अवलोकन
पेप्टाइड हेक्सारेलिन एक वृद्धि हार्मोन हो जुन प्रायः Examorelin को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। दबाइ एक secretagogue या GHSR को विकास हार्मोन को प्रकार हो। हेक्सारेलिनले GHRP-6 को रूपमा एकै तरिकाले काम गर्दछ, तर यसलाई अधिक शक्तिशाली भनिन्छ किनभने यसले तपाईंको शरीरमा बढ्दो विकास हार्मोनको उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले पनि संकेत गर्दछ कि हेक्सार्लिन बजारमा उपलब्ध GHRH सबैभन्दा बलियो हो। तथापि, नतीजाहरू समान हुन नहुन किनभने मानव शरीर फरक हुन्छन्, तर यदि तपाईंले दायाँ हेक्सारेलिन खुट्टा लिनुभयो र डाक्टरको निर्देशनहरूमा छड्नुभयो भने, तपाइँ उत्कृष्ट अनुभवको पक्का हुन सक्नुहुनेछ। The हेक्सारेलिन स्रोत यो औषधि खरिद गर्दा विचार गर्न महत्त्वपूर्ण कारक हो। तपाईं सधैं हाम्रो वेबसाइटबाट हेक्सारेलिन अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ।
2. हेक्सारेलिन Pरौतहट र Hअरे Wओक्स
हेक्सारेलिन (140703-51-1) अमीनो एसिड को एक श्रृंखला ले बनाएको छ, जब तपाईंको शरीर को तंत्र मा प्रशासित गरिन्छ, उनि आफ्नो पिट्यूटरी ग्रंथहरु को विकास को हार्मोन को अधिक या स्थिर स्तर बनाउन को लागि ट्रिगर गर्दछ। हाल, यो अझै स्पष्ट छैन कि तपाईंको शरीर प्रणालीमा एक पटक इन्जिन गरिएको औषधी कसरी ठीक हुन्छ, खास गरी जब सामान्य GHRP-6 भन्दा तुलना। यसबाहेक, साबित गर्नका लागि पर्याप्त प्रमाण रहेको छ कि पेप्टाइड हेक्सेरेलिन एक शक्तिशाली GH पूरक हो र सही तरिकाले प्रयोग गर्दा गुणस्तर परिणामहरू उद्धार गर्दछ।
अर्कोतर्फ, वैज्ञानिक डेटा र रिपोर्टले पनि देखाउँछ कि प्रयोग पेप्टाइड हेक्सारेलिन आजको बजारमा कुनै पनि अन्य विकास हार्मोन औषधि भन्दा बढी भन्दा बढी शरीरमा प्रोल्क्टिन र क्यार्टिसोलको स्तर बढाउनुहोस्। तपाईंको शरीर प्रणालीमा प्रो्ल्याक्टिनको सुधारिएको स्तर महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ किनकि यो विशिष्ट एनाबिक स्टेरियोड लिँदा हुन सक्छ। यद्यपि, तपाईंको शरीरको प्रणालीमा Ghrelin स्तरहरू यस औषधिद्वारा अझ बढाइनेछ जुन GHRP प्रयोग गर्दा यो मामला हो, यद्यपि यसमा हेक्सारेलिनसँग एउटै रासायनिक संरचना छ।
अध्ययनले साबित गरेको छ कि हेक्सारेलिन बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा छिटो अभिनय वृद्धि हार्मोन पूरक हो। तथापि, औषधि केहि निश्चित अवधि पछि कार्य रोक्छ। सामान्यतया, खुसीको पहिलो चार हप्ता भित्र तेर्सो हार्मोन्सले छिटो बढाउनुपर्छ। यद्यपि चक्र अब तपाईंको डाक्टरको सल्लाह अनुसार निर्भर हुन सक्छ, अध्ययनले संकेत गर्दछ कि 16 हप्ताभन्दा बढीका लागि हेक्सारेलिन लिनको लागी न्यूनतम लाभहरू छन्। तपाईले 8 को लागि 12 हप्ता सम्म लागी औषधि लिनु पर्दछ त्यसपछि लगभग6हप्ताको डोजर ब्रेक लिनुहोस्। हेक्सेरेलिनको प्रयोगले प्राकृतिक हाइड्रोन्सको प्राकृतिक उत्पादन तपाईंको पिट्यूटरी ग्राउण्ड्सहरू रोक्न जस्तै रोकिएको छैन जस्तै कि टेस्टोस्टेरोन पूरक प्रयोग गर्दा।
3. हेक्सारेलिन प्रभावहरू
यद्यपि यो वृद्धि हार्मोन औषधि हो, हेक्सर्ेलिनले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रभाव प्रदान गर्दछ। एथलेटहरूले सामान्यतया यो औषधि प्रयोग गर्दछन् किनभने यसले दुबला मांसपेशिहरु को निर्माण मा मदद गर्दछ र समग्र शरीर को बल को बढावा गर्दछ। काट्ने चक्रमा, हेक्सारेलिनले पनि शरीरको बोसोको कम तहलाई सहयोग पुर्याउँछ साथै ऊतक रिकभरी दर सुधार गर्दछ। उचित आहार र काम गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ हेक्सारेलिन खुराक किनकी उनि परिणाम को गुणवत्ता को निर्धारण गर्नेछन् तपाईं आनंद ले जाएगा। तपाईं अधिकतम लाभहरूको आनन्द लिनका लागी एनाबिक स्टेरियोडहरूसँग लागूपदार्थ जोड्न सक्नुहुन्छ। एनाबोलिक प्रभावहरूको लागि, तपाईंले एक्क्सेरेलिन मात्र लिनुहुँदा तपाईंले केहि पनि अनुभव गर्नुहुनेछ।
औषधिले पनि उत्कृष्ट बन्द-सिजन वा काटन चक्र पूरै बनाउँछ किनभने यो चयापचयमा सुधार गर्दछ, यस प्रकार वसा हानि बढाएर। मेडिक्सले पनि हेक्सारेलिन मांसपेशीको रिकभरीमा विशेष गरी सहयोग पुर्याउन मद्दत पुर्याएको छ, विशेष गरी एथलीटहरूको लागि जो धेरै काम गर्छन। तपाईलाई ध्यान दिनुहोस् कि हेक्सारेलिनले तपाईंलाई कुनै पनि एनाबोलिक प्रभावहरूमा बेवास्ता गर्दैन र शरीरको मोटो जलाउने दर मात्र बढाउन सक्छ, जसले चक्र काट्नको निम्ति यो आदर्श उत्पादन गर्दछ।
यसको अतिरिक्त, हेक्सारेलिनले अनुसन्धानको आधारमा प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न रिकभरी र उपचार लाभ प्रदान गर्दछ जुन यसले बजारमा उत्कृष्ट पेप्टाइड्स गर्दछ। हेक्सारेलिन एक छोटो समाधान हो जुन निम्न रिकभरी फाइदाहरू प्रदान गर्दछ;
जोडहरु को उपचार मा मदद गर्दछ र धेरै खेलाडीहरुको लागि आदर्श छ
तंत्रिका तंत्र को सुदृढीकरण र सुधार
ऊतक र मांसपेशी फाइबरको मरम्मतमा एड्स
हड्डी घनत्व बढाउनुहोस्
तपाईंको हृदयलाई सुरक्षित राख्छ, जुन दाँतको ऊतकको उपचार समावेश गर्दछ र साथै तपाईंको बायाँ सेन्टट्रिकमा दबाब बढाउँछ।
4. हेक्सारेलिन साइड इफेक्ट
कुनै पनि अन्य ड्रगको रूपमा, पेप्टाइड हेक्सारेलिनले तपाईंलाई केही साइड इफेक्टहरू बेवास्ता गर्न सक्दछ, खास गरी यदि तपाईं ओभरडोज वा डोज निर्देशनहरू पछ्याउन असफल भए। केहि सामान्य साइड इफेक्ट समावेश गर्दछ;
प्रलोक्टिनको बढि स्तर
कोर्टिसोल स्तर बढाउनुहोस्
5. Hexarelin प्रयोग
दबाइको खुट्टा एक कम कष्ट इंजेक्शन को माध्यम ले प्रशासित हुन्छ। पेप्टाइड हेक्सारेलिन पाउडरको रूपमा अवस्थित छ जुन यो ब्याक्टेरियोस्टिटिक पानीमा थप गरेर तयार हुनुपर्छ। हेक्सारेलिन (140703-51-1) आदर्श खुराक प्रति दिन 200mg को बारे मा छ र चिकित्सा लाभ को लागि धेरै राम्रो तरिकाले काम गर्दछ। तथापि, तपाईंको अवस्था वा तपाईंको शरीरको शक्तिको आधारमा, तपाईंको डाक्टरले हेक्सारेलिन इंजेक्शन खुराक प्रति दिन 400mgs बारेमा बढ्न सक्छ। विभिन्न चिकित्सा विद्वानहरूले गरेको अध्ययनबाट डेटा देखाउँछ कि फाइदाहरू समान छन्, भले पनि तपाईंले प्रति दिन 200mgs भन्दा बढी लिनु हुन्छ। यसैले, अधिक खुराक लिनु भनेको तपाईंको थप फायदा हुनेछ। हेक्सारेलिन स्ट्याकले पनि हेक्सारेलिन अनुभव प्रदान गर्दछ।
6. किन्न पेप्टाइड Hexarelin अनलाइन
GH औषधिका अधिकांश अनलाइन अनलाईन छन्, र तपाइँ सँधै तपाईंको अर्डर आफ्नो घरको सान्त्वनाबाट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस क्षेत्रमा हेक्सेरेलिन आपूर्तिकर्ता हौं। हामी दुनियाभरको समयमै डिलिवरी दिन्छौं। हाम्रो वेबसाइट प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ, त्यसैले तपाईं सजिलैसँग एक उत्पादनबाट आफ्नो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा डेस्कटप प्रयोग गरी अर्को लाई अप गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, हामी सधैँ ग्राहकहरूलाई सावधान रहन सल्लाह दिन्छ जब हेक्सारेलिन सप्लायर छनौट गर्नुहोस्। तपाईले भरिएको कुनै हेक्सारेलिन स्रोत बाट एक अर्डर नगर्नुहोस्। तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस् र सबैभन्दा सम्मानित र अनुभवी हीक्सारेलिन आपूर्तिकर्ता छान्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो देशका नियमहरू पेप्टाइड हेक्सेरेलिनको खरिद, आयात, वा स्वामित्वको बारेमा भन्नुहुन्छ। हामी एक कानूनपदार्थ कम्पनी हो, र हामी हाम्रो वफादार ग्राहकहरु लाई आफ्नो सम्बन्धित सरकारहरु संग समस्यामा राख्न चाहन्नौं। उदाहरणको लागि, यूएसमा, हेक्सारेलिन अनलाइन किन्नु केवल कानूनी हो जब तपाईं अनुसन्धान उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तथापि, जब तपाईं हेक्सारेलिन व्यक्तिगत प्रयोगको लागि किन्नु हुन्छ यो अवैध हो। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हेक्सारेलिन इंजेक्शनको लागि प्रशिक्षण लिनु अघि तपाईंले खुराक लिन शुरु गर्नु भयो।
संक्षिप्तमा, विकास हार्मोन हेक्सेरेलिन उद्योगमा सबैभन्दा शक्तिशाली पेप्टाइडहरू छन्। यद्यपि, यो सामान्य HGH भन्दा कम लागत र प्रयोगकर्तालाई पर्याप्त लाभ प्रदान गर्दछ। हाल, औषधिको बारेमा कुनै पनि डाटा छैन, तर त्यसो त कम अध्ययनहरू यो संकेत गर्दछ हेक्सारेलिन पाउडर गुणस्तर परिणाम प्रदान गर्दछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईलाई राम्रो परिणामका लागि विश्वसनीय हेक्सारेलिन स्रोतबाट लागू औषधि पाउनुहोस्। दायाँ हेक्सारेलिन इंजेक्शन लिनुहोस् र डोज निर्देशनहरू हेर्नुहोस्। केहि समय मा तपाईंको डाक्टर को समय मा सूचित गर्दछ।